Nepali adult story : अनि मैले बिस्तारै उनलाई अंगालो हाले - Nepali Sex Story
Home chikeko katha lado Nepali adult story Nepali Sex Story in Nepali puti youn katha यौन कथा सेक्सी कथा Nepali adult story : अनि मैले बिस्तारै उनलाई अंगालो हाले
बिहान करीब ६ बजे मेरो निद्रा खुल्यो र म बाथरुम भए तिर गए । बाथरुम भित्र बाट बन्द थियो , शायद कोहि पसेको हुनु पर्छ । मैले ढोका खोल्न खोजेको थाहा पाएर भित्रबाट “एक छिन , म नुहाउँदैछु ” भन्ने बहिनी रमिलाको आवाज आयो , अनि मैले “सरी , सरी !!” भन्दै पुनः कोठा तिर लागे । एक छिन पछि “ल बाथरूम खाली भयो है ” भन्दै रमिला हाम्रो कोठामा छिरिन । भरखर नुहाएर कपाल खुलै राखेर अनि लुंगीले आफ्नो शरीर ढाकेकी रमिला निकै सेक्सी देखिएकि थिई । तै पनि मनलाई सम्हाल्दै ” ल ल , त्यसो भए म जान्छु अब” भने र बाथरुम तिर लागे । बाथरूम छिरेर भित्रबाट छिटकिनि लाएर म पिसाब फेर्न थाले । यसो यता उती नियालेर हेरेको , ह्यांगरमा एउटा पेन्टी झुण्ड्याएको देखे । मलाई के सुर चल्यो हतार हतार त्यो पेन्टी झिके र यस ओल्टाई पल्टाई गर्न थाले ।
शायद त्यो पेन्टी रमिलाको हुनु पर्छ , उनले बाथरूम जान कसैलाई हतार भएको सोचेर होला , पेन्टी नधुई त्यतीकै राखेकी रहिछ । पेन्टीको पुती बस्ने भाग निर भिजेको थियो , हल्का सेतो सेतो पानी जस्तो थियो । मलाई खपी नसक्नु भयो , मैलो त्यो भाग सुंघ्न थाले । एउटा अनौठो प्रकारको मिठो गन्ध आईरहेको थियो त्यो पेन्टीबाट । मलाई के भो के भो , मेरो लाँडो त ठन्केर आयो । म अझै नाकै गाडेर सो पेन्टी सुँघ्न थाले , मेरो लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु को भयो । अनि मैले बिस्तारै लाँडो हल्लाउन थाले , जे सुकै होस एक पटक छोल्नै पर्ला भनेर कसी कसी छोल्न थाले । रमिलाको पेन्टीलाई देब्रे हातले समातेर नाकमा राखी सुँघ्दै दाहिने हातले छोल्न थाले । करी ५ मिनेट जति छोले पछि मेरो लाँडोले पिच्च …… पिच्च……. माल झार्यो , मन हलुँगा भएर आयो अनि मनमनै सोँच्न थाले , रमिलाको पुतीको रस त यति मीठो छ भने , उसको पुती चाट्न र चिक्न पाए कस्तो होला ? त्यस पछि लाँडो सफा गरे अनि मुख धुईओरी म बाहिर निस्के ।
कोठमा गए अनि कपडा बदलेर म बाहिर निस्के । रमिला किचनमा चिया बनाउँदै थिई , म डाईनिङ टेबलमा बसे । रमिलाले चिया र बिस्कुट ल्याएर दिई , अनि भनि “दाई , ल अहिलेलाई चिया र बिस्कुट खाँदै गर्नु , म एकैछिनमा खाजा बनाई हाल्छु है ।” मैले पनि “हुन्छ ” भन्दै चिया र बिस्कुट खान थाले । चिया खाँदै लुकि लुकि रमिलाको कण्डो , दुधको पोका हेर्न थाले । मेरो लाँडो त ठनक्क ठन्केरा आयो । उसको मिडियम साईजको दुधको पोका सम्झन थाले , च्याप्प समातेर माडी रहुँ जस्तो लाग्यो अनि चुसीरहुँ जस्तो लाग्यो । जुरुक्क उठेर गई च्याप्प समातेर उसको पूतीमा ल्वाम कि ल्वाम छिराऊँ झै भएर आयो । बिस्तारै चिया पिई सकेर म पुनः कोठा तिर लागे । गोपाल उठेर नुहाई ओरी बसिरहेको रैछ । हामी केहि बेर गफ गर्न थाल्यौ । एक छिन पछि रिमिलाले खाजा लिएर आई र हामी खाजा खान थाल्यौ । खाजा खाईसके पछि गोपाल र म यसो घुम घाम गर्न घरबाट निस्कियौ । हामी १० बजे तिर फेरि घर छिर्यौ । “दाई खाना तयार छ है , तातो मै खाई हाल्नु , ल बस्नु बस्नु ” रमिला ले भनि , अनि हामी हात मुख धोएर खाना खान बस्यौ । खाना खाई ओरी गोपाल र म कोठा तिर गयौ ।
दिन भरी हामी टी. भी. हेर्दै गफ गर्दै बस्यौ । करीब साँझको ५ बजे तिर रमिलाले पुनः हामीलाई खाजा खान बोलाई । हामी डाईनिङ टेबलमा बस्यौ । उनले मासु , आलु फ्राई साथै अरु खाने कुरा ल्याएर टेबलमा राखिदिई । “बियर खाने हो ?” भनेर गोपालले मलाई सोध्यो । “दशै हो , खाउँन त” मैले सहज रुपमा उत्तर दिए । गोपालले फ्रिजबाट चीसो २ बोतल बियर झिक्यो र हामी बियर खान थाल्यौ । “दशै हो , आन्टी र रमिलाले पनि अलि अलि बियर लिए भो नि त” मैले उत्सुक हुँदै भने । “ल ल हुन्छ , देउ न त हामीलाई पनि १ -१ गिलास” आन्टीले भन्नु भयो र रमिलाले २ वटा गिलास ल्याई । मैले बियर राखिदिए अनि “चियर्स …………” भन्दै बियर को चुस्की लिन थाल्यौ । खाँदा खाँदै ८ बोतल बियर सकिएछ , मलाई त झम झम बनायो । आन्टी र रमिलाले पनि अलि अलि मातेको कुरा बताए । “ल अब खाना खाने है त ” भन्दै आन्टीले खाना पस्किन थाल्नु भयो र हामी हात धुएर बस्यौ । खाना खाई सके पछि म टी.भी. हेर्न थाले तर गोपाल चै कोठा तिर सुत्न गयो । आन्टी र रमिला किचन सफा गर्न थाले ।
करीब साँढे १० तिर रमिला पनि सबै काम सकेर टी. भी. कोठामा आई । म टी. भी. मा सोनी च्यानलको प्रोग्राम हेर्दै थिए । उनी मेरो छेउ मा आएर बसी । हामी बिच पढाई सम्बन्धी कुरा चल्न थाल्यो । करीब आधा घण्टा कुरा गरे पछि , म पिसाब फेर्न बाथरुम गए अनि आए , रमिला टी. भी. मा गीतको च्यानल लाएर बसी रा थी । म पनि गीतहरू हेर्दै बसे । करीब ११ बजे तिर म उठे र कोठा तिर जान लागे । “एक छिन बस्नुन , अनि जानु नि सुत्नु , किन हतार गर्नु भाको ?” रमिलाले भनी । मैले पनि “हुन्छ नि त” भन्दै पुनः सोफामा उ छेउमा बसे । सबै जना सुती सकेका थिए । “दाई म एउटा कुरा सोध्छु , नरिसाउनु ल ” रमिलाले भनी । “हुन्छ सोध न , किन रिसाउनु र ” मैले जवाफ फर्काए । “तपाईको गर्लफ्रेण्ड छ कि छैन ?” उनले लजाउँदै सोधी । “छैन नि , म जस्तोलाई कुन केटीले मन पराउँछ र ” मैले भने । “किन मन नपराउनु र , तपाई राम्रो हुनुहुन्छ , बानी बेहोरा पनि राम्रै छ जस्तो छ ” उनले भनी । “खै , शायद अहिले सम्म कुनै केटी मेरो लागि जन्मेको छैन कि ?” मैले जवाफ फर्काए । “अनि तिम्रो चै ब्वाईफ्रेण्ड छ कि छैन त” मैले तुरन्तै उसलाई सोधे ।
“ब्वाईफ्रेण्ड भनेर नै चै छैन , तर मन पर्ने एकजना केटा चै छ, तर उसले मन पराउँछ पराउँदैन थाहा छैन” उनले अलि लजाएको स्वरमा भनी । “हो र , अनि प्रोपोज गरेको छैनौ त ?” मैले पुनः सोधे । “छैन नि , पहिला पढाई नै सकाउँ कि भनेर नि ” उनले जवाफ फर्काई । “ए , त्यो पनि राम्रै हो ” मैले उसको ढाँड मा धपधपाउँदै भने । उ मेरो अझ नजिकै आउँदै भनि “साँच्ची , म तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?” उनले सोधी । ” उनको फिला मेरो फिलासँग टाँसिएको थियो । उनको दुधको पोकाहरू लुगा बाहिर बाट प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनले टाईट टी-शर्ट लाकि थिई र टाईट पेन्ट । “तिमी असाध्यै राम्री छौ नि , तिमीलाई पाउने त भाग्यमानी हुन्छ ” मैले उनलाई फुर्काउन जवाफ दिए । “होला होला , म त्यती राम्री त छैन , म भन्दा मेरा साथीहरू कती राम्री छन” उनले मधुरो स्वरमा जवाफ दिई । “हो क्या , तिमी राम्री छौ , तिम्रो जीउडाल पनि मिलेको छ” मैले उनको गालामा समाउँदै भने । “धन्यवाद तपाईलाई , मलाई राम्री भन्नु भाको मा” उनले जवाफ दिई ।
उनको गाला समाउँदा उनले कुनै प्रतिकार गरीनन , जसले मलाई अझ अगाडी बढ्ने हौसला प्रदान गर्यो । अनि मैले बिस्तारै उनलाई अंगालो हाले र भने “तिमी राम्री छौ , तिमी जस्तो केटी पाए त म अहिले नै I Love You भन्थे” मैले साहस गरेर भने । “हो र ? ल हेरौ न त I Love You भनेको” भन्दै उनी अझ म सँग टाँसिन थाली । मैले सोचे , मौका यही हो , अनि उसलाई दुबै हात ले अंगालोमा हाले र बिस्तारै कानको छेउमा “I Love You” भने । उनी मेरो अंगालोबाट फुत्किई अलि पर गएर हाँस्न थाली । म फेरी उनलाई समाउन अझ नजिक गए । “साच्ची भनेको , I Love You” मैले उनलाई पुनः अंगालोमा बाँधेर भने । उनी केही नभनी मेरो छातीमा टाउको राखेर बसी रहीन । मलाई अझ खपी नसक्नु भयो , उसको गालामा किस गर्दै भने “I Love You रमिला, के तिमी मेरो गर्लफ्रेण्ड बन्छौ ?” उनले केही पनि भनिनन् । “Yes भन कि No भन , नत्र मा सुत्न जान्छु । उनले लजाएर “Yes” भनि । अनै मैले बिस्तारै उनको गालामा , निधारमा किस गर्न थाले ।
अब मलाई कुनै डर थिएन , जसले गर्दा मैले बिस्तारै उनको मुखमा मेरो मुख लगे अनि बिस्तारै मुखमा किस गर्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै मेरो जिब्रो ले उसको जिब्रो खेलाउन थाले । मेरा हातहरु सुस्तरी सुस्तरी उनको दुधको पोका तिर सार्न थाले । “एक छिन , दाई वा आमा आउनु भयो भने मार्नु हुन्छ ” उनले डराउँदै भनी । “आउँदैनन होला, सबै मस्त निद्रामा छन क्या” मैले उनलाई अंगालोमा बाँधेरै जवाफ फर्काए । बिस्तारै उनलाई किस गर्दै टी-शर्ट बाहिरबाट नै उनको कसिलो दुधको पोकाहरू माड्न थाले । उनी “स्वाऽऽऽऽऽऽऽ , स्वाऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मेरो लाँडो ठन्केर कट्टुनै च्यातेर बाहिर निस्केला झै भाको थियो । बिस्तारै उनको टी-शर्ट भित्रै हात लगेर उनको दुध माड्न थाले । उनलाई किस गर्दै मैले दुबै हात उसको ढाँड तिर लगेर ब्राको हुक खोलिदिए र दुबै हातले उसको दुबै दुधको पोकाहरू माड्न थाले । “ऐयाऽऽऽऽ , दुख्यो , अलि बिस्तारै गर्नु न ” उनले रुञ्चे स्वरमा भनी । “सरी सरी , म त जोशमा आएर बेस्सरी गरेछु , ल ल अब बिस्तारै गर्छु” भने अनि दुधको पोकाहरू बिस्तारै बिस्तारै माड्न थाले ।
अब उनी पनि मलाई किस गर्दै थिई , उनीलाई पनि अब जोश चढे जस्तो थियो । करीब १० मिनेट जति किस गर्ने र दुध माड्ने काम भइ पछि मैले उनलाई सोफामा बसाए । उनी कुनै अप्ठयारो नमानी बसी रही । अनि मैले उनको टी-शर्ट र ब्रा खोले , उनको कसिलो दुधको पोका देखेर म मा एक प्रकारको तरंग पैदा भयो । अनि म उसको अगाडी बसे अनि उनको दुधको मुण्टो जिब्रोले खेलाउन थाले । उनी आँख चिम्म गरेर लामो लामो सास फेर्दै थिई “स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” अब म मा सहन सक्ने स्थिती थिएन , कति बेला उसको पूतीको दर्शन गरौ , मेरो लाँडो छिराएर मजाले चिकौ भई सकेको थियो । मैले बिस्तारै रमिलालाई सोफामा नै सुताए । उनको पेन्ट खोलिदिए । उनले केही भनिनन , शायद उनलाई पनि मजा आई रहेको थियो र चिक्नलाई आतुर भई सकेको थियो । उनले गुलाबी रङको पेन्टी लगाएकी रहिछ । पेन्टीको तल भाग भिजेको थियो , शायद मैले उसको दुधको पोका माडेको ले उसको पुतीबाट पानी झरेको हुनु ‍पर्छ ।
मैले पेन्टी बाहिरबाटै उनको पुती खेलाउन थाले । उनी त झन ईमोशनमा आईछ क्यार , “आहहहहहह, ओहहहहह , उफफफफफफ” भन्दै कराउन थाली । मलाई उनको त्यो आवाजले झन उर्जा प्रदान गर्यो । मैले उनको कट्टु पनि खोलेर फ्याकिदिए , अब उनी मेरो अगाडी नांगै थिई । मैले पनि हतार हतार आफ्नो सबै लुगा खोले अनि उनको पुती खेलाउन थाले । देब्रे हातले उनको पुतीको टीसी खेलाउन थाले अनि दाहिले हातले उनको दुधको पोकाहरू माड्न थाले । करीब १० मिनेट पछि उनको पुतीबाट पानी झर्न थाल्यो । मेरो हात पुरै च्याप-च्याप भयो । उनी सुस्केरा हाल्दै आफ्नो कण्डो हल्लाउन थाली । शायद उनलाई पनि खपी नसक्नु भई सकेको थियो , त्यसैले अब उनी आँख चिम्म गरेरै मलाई अंगालोमा बाँधेर किस गर्न थाली । मैले उसको दाहिने हात समाएर मेरो लाँडोमा राखि दिए । उनी अब मेरो लाँडो खेलाउन थाली । यस्तो लाग्थ्यो लाँडो खेलाउन उनी खप्पीस थिई । लाँडोलाई च्याप्प समाएर उनी भित्र-बाहिर गर्न थाली । मैले केही नभनी उको पुती खेलाउन थाले र सँग सँगै दुध पनि माडदै थिए ।
यस्तै ५ मिनेट जति पछि मैले उनको खुट्टा फटाएर अब चिक्ने अवस्थामा मिलाए । बिस्तारै मेरो लाँडो उसको पुतीको मुखमा लगे अनि बिस्तारै छिराउन खोजे । शायद उनको पुती भरी पानी भएकोले गर्दा होला , कुनै गाह्रो नभई मेरो लाँडो उसको पुतीमा स्वात्तै भित्र छिर्यो । “आहहहहहहहह” उनी कराई । अब म बिस्तारै बिस्तारै उनलाई चिक्न थाले । म जति उनलाई ठेल्थे , उनी त्यती नै तल बाट कण्डो हल्लाउँदै मलाई पनि ठेल्थी , यस्तो लाग्थ्यो उनी चिक्न र चिकाउन पनि सिपालु भई सकेकी थिई । मलाई कुनै मतलबनै थिएन , जे होस आज पनि एउटा पुती चिकिदै थियो । यही सम्झेर म उनलाई कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उनी पनि मलाई तलबाट माथी उफ्रिदै साथ दिदै थिई । १० मिनेट जति यो अवस्थामा चिके पछि मैले मेरो लाँडो उसको पुतीबाट निकाले र उनलाई सोफाबाट उठाए । “तिमीलाई कस्तो लागि रहेछ रमिला ?” मैले अन्जान भएर सोँधे । “मलाई त अचम्म लागि रहेको छ, हामी कसरी यस्तो गर्न थाल्यौ है , मलाई त सपना जस्तो लागि रहेको छ ।
Khola ma Bhauju chikeko katha (sex story)
Chatpate banaune didi lai rati chikeko katha (sexy story)
तपाई मेरो दाईको साथी , तर तपाईसँग नै म आज सेक्स गर्दैछु , दाईले थाहा पायो भने त बर्बादै हुन्छ ” उनले भनी । “कसरी थाहा पाउँछ र , तिमी पनि भन्दैनौ , म पनि भन्दिन , होईन ?” मैले जवाफ दिए । “त्यो त हो , तै पनि …….” उनले लजाउँदै भनी । “छोडदेउ यो कुरा , खै सोफामा हात राखेर घोप्टो परेर बस” मैले उनलाई सोफा तिर ढकेल्दै भने । उनी पनि मैले भने जस्तै गरेर बसी , हुनसक्छ उनले यो पोजिसनमा पहिले पनि चिकिसकेको हुनुपर्छ । उनी खुट्टा फट्याएर घोप्टो परेर चिक्न सजिलो हुने गरी बसी । मलाई खासै गाह्रो भएन र मैल उनलाई कुकुर ले चिकेको स्टाईलले चिक्ने बिचार गरे । बिस्तारै मेरो लाँडो उनको पुतीमा छिराए । “ऐय्याऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , बिस्तारै गर्नु न , यसरी गर्दा त दुख्छ” उनले कराउँदै भनी । अनि मैले बिस्तारै उनको पुतीमा लाँडो छिराए र बिस्तारै बिस्तारै धक्का दिन थाले । उनी “आहहहहहहह ओहहहहहहह उफफफफफफफ” गर्दै कराउन थाली ।
उनका ती सुस्केराहरूले मेरो जोश बढ्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । अब भने म फुल स्पीडमा उनलाई चिक्न थाले । “कचक कचक कुचुक कुचक ठ्याप ठ्याप” यस्ता आवाजहरू सो कोठामा गुञ्जीरहेको थियो । म बल गरी गरी उनलाई पछाडिबाट चिक्दै थिए , उनी पनि कण्डो हल्लाउँदै मलाई साथ दिदै थिई । उनी निकै जोशमा कराउँदै थिई “अझै कस्सेर , अझै कस्सेर ……….. अलि छिटो…….. अलि छिटो………” म पनि भएभरको बल लगाउँदै उनको कम्मर समाउँदै चिक्न थाले । करीब ७-८ मिनेट जती चिके पछि मेरो माल झर्ला जस्तो भयो अनि फुत्त मेरो लाँडो उसको पुतीबाट बाहिर निकाले । “किन निकाल्नु भाको , गर्नु न प्लिज” रमिला स्वाँ स्वाँ गर्दै कराउन थाली । “एकछिन न , मेरो झर्न लाग्यो क्या” मैले भने अनि उनलाई मतिर फर्काएर फेरी किस गर्न थाले । एक हातले फेरि उसको पुती खेलाउन थाले । २-३ मिनेट पछि मैले उनलाई भुईमा कोल्टे पारेर सुताए अनि म उनको पछाडी पटी कोल्टे परेर सुते । उनको एउटा खुट्टा माथि तिर उचाले अनि बिस्तारै उनको पुतीमा मेरो लाँडो छिराए ।
यसरी चिक्दा मेरो पुरै लाँडो उनको पुती भित्र त छिरेन तर पनि चिक्न मजा नै आउने रैछ । बिस्तारै बिस्तारै पछाडी बाट उनलाई चिक्न थाले । यसरी धेरै बेर चिक्न सकिन , थाकिदो रैछ र पुनः उठेर उनलाई उतानो बनाए अनि उनको दुबै खुट्टा मेरो काँध माथी राखे र फेरि उनलाई चिक्न थाले । यसरी चिक्दा चै पुरै लाँडो उनको पुती भित्र छिर्यो । म बल गरी गरी उनलाई यसरीनै चिक्न थाले , उनी फेरी “आहहहहहहह ओहहहहहह उफफफफफफ, अझै अझै …….. छिटो छिटो……..” भन्दै कराउन थाली । यसरी लगातार ५ मिनेट जति चिके पछि , मैले मेरो लाडोबाट निस्केको माललाई सम्हाल्नै सकिन र उनको पुती भित्र सबै माल झारिदिए । म थाकेर निकै शिथिल भए र उनको माथी नै पल्टि रहे । शायद रमिलालाई अझै चिकाई पुगेको थिएन क्यार , उनी मुनिबाट कण्डो हल्लाउँदै “गर्नु न प्लिज……….” भन्दै कराउँदै थिई । म बचेको बल प्रयोग गर्दै फेरि हल्लिन थाले । लाँडो सुकेर लुत्रुक्क परि सकेको थियो , तै पनि उनलाई माथीबाट धक्का दिँदै थिए ।
Bakhara charauna jada sex gareko story [nepali sex stories]
Buda hospital gaye paxi ko mero romanchak chikeko story [hot sex story]
Bhauju lai mero lado chusna lagaye [bhauju sex story]
२ मिनेट जति पछि म हल्लिनै सकिन र लाँडो बाहिर निकालेर उसको छेउमा पल्टिए । उनी पनि स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । ५ मिनेट जति हामी त्यै अवस्थामा पल्टि रह्यौ । “कस्तो लाग्यो रमिला?” मैले सोँधे । “रमाईलो भयो , खुशी लाग्यो , मजा आयो” उनले लामो लामो सास फेर्दै भनी । “मलाई पनि मजा आयो , तिम्रो अनुहार मात्रै होईन सबै थोक राम्रो रहेछ , I Love You” भन्दै उनलाई किस गर्न थाले । उनले पनि “I Love You” भन्दै मलाई अंगालो हाली र किस गर्न थाली । “ल अब सुत्न जाउँ ल, भोलि फेरि गर्ने नि है” भन्दै म उठेर कपडा लाउन थाले । उनी पनि “हुन्छ हुन्छ” भन्दै उठी र कपडा लाउन थाली । “गुडनाईट, I Love You” भन्दै म उसलाई किस गरे अनि हामी छुट्टियौ । उनी पनि “Thank You, I Love You Too” भन्दै बाथरुम तिर लागी । म पुरै थाकेको ले कोठामा छिर्न बितिकै खाटमा पल्टे । रमिलाको दुधको पोका, पुती , उनलाई चिकेको झलझली आँखामा आई रह्यो , कतिबेला बिहान हुन्छ अनि फेरि चिकौला भन्ने सम्झँदा सम्झँदै म भुसुक्कै निदाएछु ।
chikeko katha lado Nepali adult story Nepali Sex Story in Nepali puti youn katha यौन कथा सेक्सी कथा